पुस १५, राेल्पा ।
जब पुस ९ गते विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट देशभरका सबै पार्टीका सम्भावित समानुपातिक सांसदहरु भनेर सार्वजनिक गरियो । त्यसमा ५ नं. प्रदेशको एमाले भित्र जनजातिको कोटा ३ भित्र २ नं.मा मेरो नाम पनि छापिएको थियो । त्यसपछि एमालेका केन्द्रीय-प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू र अन्य शुभचिन्तकबाट फोनमार्फत बधाईको ओइरो आउन थाल्यो । धेरैले फेसबुकमार्फत समेत बधाई दिए । मैले त्यहीबीचमा केही केन्द्रीय नेताहरूलाई समेत सोधेँ, ‘के यो नै अन्तिम होला त भनेर ?’ धेरैले ‘ढुक्क हुनुस्, तपाईँ सुरुदेखि जनजाति महिलाको २ नं. मा हुनुहुन्छ । तलमाथि गर्न निर्वाचन आयोगले मान्दैन ।’त्यसपछि फाइनलमा पनि परिन्छ भनेर आशा पालेर बसेँ । त्यो स्वभाविक पनि थियो जस्तो लाग्छ । दिनरात मिडियमाार्फत पार्टी र निर्वाचन आयोगको अन्तिम रिजल्ट कुरेर बसेकी म पुस १३-१३ गते भने फरक हल्लाले तर्सिएँ । जनजाति महिला जम्मा ४ जना । मिडियामा एमालेको ५ नं. प्रदेशमा ३ जना जनाजाति देखेपनि अन्तिममा २ जनामा झार्यो । जनजाति महिलाको ४ नं. सूचीमा रहेकी एक जना घर्ती थरकी उम्मेदवारले घर्ती (भुजेल) अल्पसंख्यकको सिफरिस बनाएर निर्वाचन आयोगमा पेस गरेकाले उहाँ १ नं. मा आउनुभयो । ब्राह्मणसँग बिहे गरेर नागरिकता समेत बनाइसके पनि जनजातिको सिफारिस पेस गरेर सूचीको १ नं.मा रहनुभएकी एक जना थापा थरकी २ नं. मा परेर २ जनाको नाम फाइनल भएको कुरा सुनियो । त्यसपछि मन खिन्न भयो । नेताहरूलाई सोधे तर कतिले ‘यो हुनै सक्दैन नआत्तिनुस्’ भने । तर पनि पत्यार लागेन ।